Macluumaadka Shirkadda - Drotrong Chinese Dhir Biotech Co., Ltd.
Ilaa 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. waxay ku hawlanayd dhisida silsilad warshadeed oo dhan oo geedo shiineys ah, taas oo ay kujirto dhirta Shiinaha ee dhirta, abuurka, howsha aasaasiga ah, qoto dheer, soosaarida dhirta iyo ganacsiga.
Horumarinta shirkadeena, waxaan aasaasnay ​​saldhig lagu beero iyo saldhig wax soo saar oo geedo Shiinaha ah. Shirkadeena waxay ku shaqeysaa si buuxda u hogaansanaanta xeerarka GACP. Geedi socodka oo dhan ee seedling, beerto, processing aasaasiga ah, kaydinta iyo saadka ee qalabka daawada Shiinaha la raad raaci karo si loo hubiyo in tayada wax soo saarka our. Saldhigga dhirta, waxaan leenahay Epimedium, Cortex Phellodendri, Polygonatum Sibiricum, Saussurea Costus iyo wixii la mid ah, oo daboolaya in ka badan 20 milyan oo mitir murabac ah. Saldhigga wax soo saarka, waxaan leenahay labo warshadood oo wax soo saarka aasaasiga ah iyo hal warshad soo saarida dhirta oo daboosha in kabadan 60,000 mitir murabac ah. Waxaan qorsheyneynaa inaan ku dhisno warshad cusub soo saarista dhirta iyo warshad soo saarta daryeelka caafimaadka saddex sano gudahood.
Epimedium waa geedo muhiim u ah shirkadayada horumarka. Hadda waxaan haysanaa 12 milyan oo mitir murabac ah 'seed-epimedium iyo saldhigyo beerto. Dhamaan xarumaheena curdanka ah iyo kuwa wax lagu beero waxay ku shaqeeyaan si buuxda u hogaansanaanta xeerarka GACP. Epimedium-keena waa noocyo cusub oo heer sare ah oo heer sare ah oo leh daahir sare oo ah icariine, oo ay daraasad ku sameyso shirkadeena iyo khubaro Shiineys ah oo ka tirsan machadyada cilmi baarista ee sanadaha 10. Waxaan hiigsaneynaa inaan noqono badeecada ugu weyn aduunka ee alaabada ceeriin ee epimedium, soosaarka iyo wax soo saarka dhamaaday shan sano gudahood.
Waxaan ku iibinaa alaabtayada dhamaan erayga, sida America, Canada, Spain, Japan, South Korea, Malaysia, South Africa, iwm. sumcaddana waxaan ku helaynaa suuqyada caalamiga ah.
Mabda'a ganacsi ee Drotrong waa “tayada marka hore, marka hore macaamilka”. Waxaan soo dhaweyneynaa macaamiisha aduunka oo idil si ay noolashaqeeyaan si loo gaaro guul-guul-guul!
Saldhigga & Warshad